LC ခရမ်းရောင် Theme Apex-Go-Nova | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » LC ခရမ်းရောင် Theme Apex-Go-Nova
LC ခရမ်းရောင် Theme Apex-Go-Nova APK ကို
ဒါဟာထုံးစံ icon များနှင့်နောက်ခံပုံများတပ်ဆင်ထား Apex Launcher ကို, Nova Launcher ကိုသို့မဟုတ် Go ကိုဖွင့်တင် EX များအတွက်ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ Go ကိုဖွင့်တင်ဘို့ကထုံးစံ menus တွေနှင့်ဖိုင်တွဲများရှိပါတယ်။ ဒါဟာတက်ဘလက်များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်နှင့်အပိုကြီးတဲ့ icon တွေကိုထောက်ခံပါတယ်အောက်ပါအဓိကအကြောင်းအရာအကြံပေးချက်များကိုကြည့်ပါ။
** Themes ကိုတိုက်ရိုက်ဖြန့်ချိရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Installation လမ်းညွှန်ကိုကြည့်ပါ။ **
မျက်နှာပြင်ရိုက်ချက်များတစ်5x ကို4ဇယားကွက်သုံးပြီးနေကြသည်။ (Menu ကို> Preferences ကို> Screen ကို setting များကို> Grid အရွယ်အစား) Go ကိုတင်ပေးသူအပေါ်ကိုယူ။
*** သင် bug တွေကိုရှာဖွေသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များရှိပါကငါသူတို့အား reply နှင့်သင့်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းမပေးနိုငျအဖြစ်မှတ်ချက်များအဖြစ်သူတို့ကို post ကြဘူးပါ။ ***
• Nova Launcher ကိုသို့မဟုတ် Go ကိုဖွင့်တင် EX ဒေါင်းလုပ်မလုပ်ခင်သင့်ရဲ့ device နှင့်သင့် device ကိုပေါ်ပြေးနှင့်သဟဇာတဖြစ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
Apex Launcher ကို•: Apex က Settings ကိုသွားပါ? theme က Settings? သင်ရုံ installed ဆောင်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ပါ။
• Nova Launcher ကို: Nova က Settings ကိုသွားပါ? ကြည့်ရှု့ခံစားသည် ? သင်ရုံ install လုပ် LC ခရမ်းရောင်အဓိကအကြောင်းအရာ၏အိုင်ကွန် pack ကို select လုပ်ပါ။
• Go ကိုဖွင့်တင် EX: run ဖို့, Go ကိုဖွင့်တင် EX ကို install မလုပ်ခင်သင့်ရဲ့ device ကိုများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သောသေချာအောင်ပေးပါ။ ပြီးတာနဲ့သွားလာရင်း launcher menu ကို, ကို select လုပ်ပါ themes များအနေဖြင့် download လုပ်? installed, ပြီးတော့သင်ရုံ installed LC ခရမ်းရောင် Theme ကိုရွေးချယ်ပါနှင့် Apply button ကိုနှိပ်ပါ။
• Nova Launcher ကို / Go ကိုဖွင့်တင် EX run ဖို့လိုအပ်ပါသည်။
• Themes တိုက်ရိုက် run မရနိုငျသင်တစ်ဦး launcher ကနေဆောင်ပုဒ်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ Installer ကိုအပိုင်းများတွင်ညွှန်ကြားချက်များကိုကြည့်ရှုပါ။
Launcher အဓိကအကွောငျးအရာအကြံပြုချက်များ GO
• Nova Launcher ကိုသို့မဟုတ် Go ကိုဖွင့်တင် EX ကို install မလုပ်ခင်သင့်ရဲ့ device ကိုများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သေချာအောင်လုပ်ပါ
•အ icon တွေကို update လုပ်မထားဘူးဆိုရင် -> Go ကိုဖွင့်တင် Quit, ပြီးတော့ပြန်စတင်ပါ။ - သင်က SD ကဒ်တပ်ဆင်ထားကြောင်း SD ကဒ်ပေါ်ရှိ app များရှိပါက> ဒါ့အပြင်သေချာပါစေ။ ဒီအလုပ်မလုပ်ပါဘူးလျှင်, ဆောင်ပုဒ်နှင့်အ download, uninstall ပြန် install လုပ်ပါ။ သငျသညျတရားစွဲဆိုမည်မဟုတ်ပါ။
• Go ကိုဖွင့်တင် Sphere Effect: မတူညီသော themes များပေါ်တွင်တွေ့မြင်သကဲ့သို့, နယ်ပယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို enable Launcher ကို Preferences ကို Go ကိုသွားစေရန် -> Effect က Settings -> အလျားလိုက်သို့မဟုတ်ဒေါင်လိုက် Scroll Effect ကို Select လုပ်ပါ -> Sphere ကိုရွေးပါ။
•သင်က Android OS ကို 2.2 running သို့မဟုတ်မြင့်မားသောရမည်ဖြစ်သည် SD ကဒ်ထဲရွှေ့ရန်။
• Menu ကိုသွားပါ icon တွေကိုပိုမိုကြီးမားစေရန် -> Preferences -> Visual က Settings -> Icons -> Icons အရွယ်အစား
•နမူနာ Tablet ကို setting များကို: sites.google.com/site/lcdroiddev/home/tablet-settings
မှတ်ချက်: သီးခြား apps များဖြစ်ကြသည် widgetsoid WeatherBug Elite, Go ကိုနာရီ, အစွမ်းထက် Switchman, HD ကို Widgets ။
themes ကိုတိုက်ရိုက်ဖြန့်ချိရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ Installation လမ်းညွှန်ကိုကြည့်ပါ။
အန်းဒရွိုက်လိုအပ်သည်: 1.6 နှင့်တက်
မေလ 5, 2017 မှာ 1: 25 နံနက်
အောက်တိုဘာလ 9, 2014 မှာ 11: 02 နံနက်
သင်အရမ်းကောင်း Apps ကပရှိပေမယ့်သင်တို့ကိုချို့တဲ့နေကြသည်တဦးတည်းအရာ "ဂိမ်းများ" ဖြစ်ပါတယ်